GIMP waxay soosaartay nooc cusub oo leh isbeddelo cusub oo naqshadeynta ah | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | Gimp, Qalabka Naqshadeynta
Maanta waxaa jira tiro aad u badan oo codsiyo ama barnaamijyo aad u faa'iido badan Marka laga hadlayo daabacaadda dhijitaalka ah, xayeysiintu waxay noqotay hab nololeed aad u faa'iido badan waana sababtaas tan keentay in shirkaduhu had iyo jeer u tartamaan inay abuuraan aaladaha lagama maarmaanka u ah inay magacooda kor ugu qaadaan, sawirku had iyo jeer wuxuu ahaan doonaa astaamaha soo bandhigidda marka aan u baahan tahay in la xayaysiiyo shirkadeena.
Markaan isticmaaleyno internetka, waxaan la kulmi karnaa tiro aad u tiro badan oo codsiyo waxtar leh oo ku saabsan faahfaahinta qaar tafatirka sawirka ama naqshadeynta sawirka. Waxaa jira barnaamijyo badan oo aan si raaxo leh uga isticmaali karno kumbuyuutarkayaga, laakiin aad u yar ayaa na siiya a interface fudud laakiin aad u awood badan marka ay timaado in shaqo fiican la qabto, munaasabaddan kama baaqan karno inaan xusno barnaamijkan cajiibka ah: GIMP.
GIMP waxay soo saareysaa nooc cusub oo leh isbeddelo cusub oo naqshadeynta, aaladaha sawirada iyo maareynta midabka
Kani waa qalab aad u fudud in la isticmaalo, wuxuu leeyahay wax kasta oo aan u baahanahay waxaana la dhihi karaa way ka sii gudubtaa tan.
Waa wax aad u wanaagsan marka aan u sameyno astaamo shirkado ama goobo ganacsi, noocyo alaab iib ah, iyo waxyaabo kale oo badan. Tan ka sokow, waxa sida caadiga ah soo jiita dareenka ayaa ah taas Kani waa barnaamij gebi ahaanba bilaash ah taasi waxay noqon kartaa meesha ugu sarreysa adduunka ee Photoshop.
GIMP waa barnaamij bilaash ah softiweer waxaana asal ahaan loo soo saaray in lagu isticmaalo Linux. Sababtoo ah baahida ay soo saartay maanta, waxaan sidoo kale ku raaxeysan karnaa qalabkan iyada oo loo marayo nidaamka hawlgalka Windows.
Tan iyo markii la abuuray waxaa jira noocyo badan oo la hagaajiyay waqti ka dib. Dhab ahaantii, GIMP waxay soosaarisay nooc cusub oo leh isbeddelo cusub oo qaabkeeda ah, Qalabka sawirada iyo maaraynta midabka, waxaan ula jeednaa 2.9.4, laakiin sikastaba way noo yara murugootaa si aan u ogaano inaysan ahayn mid rasmi ah, in kasta oo wax kasta oo la xiriira warkan uu gebi ahaanba xun yahay, maadaama qaabkan beta cusub waan ogaan karnaa waxa ina sugaya mustaqbalka dhow ee qalabkan qaabeynta qaabdhismeedka weyn.
Nooca 2.9.4 wuxuu leeyahay horumarin aad u muhiim ah oo mid ka mid ah kuwa ugu cajaa'ibka badan waa isdhexgalka, wax gebi ahaanba cusub, marka lagu daro sidoo kale muujinta horumarkiisa la xiriira qalabka sawirka.
Isla mar ahaantaana, waxaa muhiim ah in la xuso in waxaas oo dhami ay ku dhaceen wax ka yar 1 sano, taas oo dhammaan kuwan horumarkan weyn lagu soo daray inkasta oo ay si dirqi ah ugu jirto nooca beta, dhammaantood si aanu isticmaaluhu uga shaqeyn karin oo keliya naqshadahoodu si raaxo leh, laakiin sidoo kale inaad jeceshahay markaad isticmaaleyso qalabka.
GIMP kaliya maahan barnaamij fudud in wax laga beddelo sawirrada ama sawirrada, sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu na siiyo fursad aan ku sawirno oo aan u sameysano nashqado gebi ahaanba asalka ah xoq. Tan awgeed wuxuu hadda u leeyahay cusub Qalabka MyPaint, oo leh hawl hagaagsan oo noo oggolaaneysa inaan hordhac u helno natiijada leh burushyo kala duwan.
Dhinaca kale, waxay ku dhex leedahay qalabkan cusub astaamaha lagu yaqaan qaabka sawir qaabeysan. Qaabkan cajiibka ah waxaan ku isticmaali karnaa dhammaan faa'iidooyinka uu GIMP naga siinayo sawirada oo leh nooc isku eg, sida muraayada ama saamaynta mosaic.
Qaabkan cusub ee GIMP oo leh isbeddelo cusub oo ku saabsan naqshadeeda, aaladaha sawirada iyo maaraynta midabka (2.9.4)Barnaamijkan sidoo kale waxaa ku jira horumarin kale sida aaladaha xulashada. Tusaale ahaan waxaan u soo qaadan karnaa kiisaskaas oo qayb la xushay ay ku jiraan meelo badan oo kale oo yaryar oo aan la dooran, kuwaas oo waxaa lagu saari karaa hal guji.
Si la mid ah, ikhtiyaarrada kale ayaa lagu soo daray xuduudaha xulashooyinka, marka lagu daro faa'iidooyinka kale ee cusub ee u oggolaanaya ku darista pixels ku dhow qayb la sameeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » GIMP waxay soosaarisay nooc cusub oo leh isbeddelo cusub oo qaabkeeda ah